ठूला नेता काेही गितकार, काेही संगीतकर्मी, काेही भावुक त काेही माेडल | mulkhabar.com
July 14, 2018 | 7:54 am 184 Hits
प्रधानमन्त्री केपी ओली गीत लेख्छन्, तबला ठोक्छन् र मुर्चुंगाको धुन निकाल्छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल गीत मात्रै लेख्दैनन्, मोडलिङका लागि पनि तयार हुन्छन् । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले लेखेको गीत झन्डै तीन दशकअघि नै ‘हिट’ थियो र सुन्दा अहिले पनि पट्यार लाग्दैन । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले झन्डै ६ दर्जन गीत लेखिसके, झन्डै २ दर्जन रेकर्ड भइसके । राजनीतिक भाषणमा कठोर भाषा समेट्ने नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ भावुक शब्द उनेर गीतका हरफ तयार गर्छन् । राजनीतिसँगै गीत–संगीतमा सक्रिय यस्ता धेरै नेता छन् ।
नयाँ पत्रिकामा संगीत पारखी केही नेताबारे वीरेन्द्र ओलीले तयार पारेको रिपोर्ट प्रकाशीत छ –
जनयुद्धका वेला धेरै गीत लेखे उपराष्ट्रपति पुनले
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन आजकाल खासै गीत लेख्दैनन् । तर, जनयुद्धताका भने खुबै लेख्थे । युद्धमा होमिएका योद्धाका ‘रगत उमाल्ने’ गीत लेख्थे उनी । जनमुक्ति सेनाको कमान्डर हुँदा आधा दर्जन गीत लेखेका पुनका केही गीत रेकर्ड गरेर घन्काइए पनि ।
‘हामी राता मान्छे, जन्मभूमिका मान्छे’, ‘हामी हुरीका सन्तान हौँ हामी’ बोलका गीत युद्धमोर्चामा खुब घन्किएको पुनका प्रेस संयोजक मनोज घर्तीमगरले बताए । आजकाल आफूले नलेखे पनि गीत सुन्न भने रुचि राख्छन् उपराष्ट्रपति पुन । प्रायः प्रगतिशील गीत नै मन पराउँछन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि संगीतका पारखी हुन् । गीत लेख्ने मात्रै होइन, उनी तबला पनि मज्जाले बजाउँछन् । मुर्चुंगामा गीतको भाका हाल्न उत्तिकै खप्पिस छन् ओली ।
प्रधानमन्त्री हुनुअघि उनी फुर्सद हुँदा घरमै विभिन्न बाजाको ताल निकाल्दै रमाउने गरेको उनीनिकट नेता बताउँछन् ।
ओलीले ४ वर्षअघि ‘म मेरो देश बनाउँछु, उन्नत अझ सुन्दर मेरो देश बनाउँछु…’ बोलको गीत लेखेका थिए । यो गीत रेकर्ड पनि भइसकेको छ । सञ्जय तुन्द्रखले स्वर दिएको यो गीत ओली उपस्थित केही कार्यक्रममा गाइएको पनि छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले एल्बम निकाले, भिडियोमा मोडलिङ पनि गरे
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल राजनीतिमा मात्रै सक्रिय छैनन्, जीवनको केही पल गीत–संगीतमा पनि बिताएका छन् । केबल श्रोताका रूपमा पनि होइन, सर्जककै हैसियतमा ।
दोहोरी र प्रगतिशील गीत सुन्ने नेता खनाल प्रगतिशील गीतमा कलम दौडाउँछन् । ‘फुर्सदमा लोकदोहोरी र प्रगतिशील गीत सुन्छु,’ उनले सुनाए, ‘कम्युनिस्ट भएकाले होला मलाई प्रायः प्रगतिशील गीत नै मन पर्छ ।’
चार वर्षअघि एउटा एल्बम नै निकाले– परिवर्तनका स्वरहरू । १२ गीत समेटिएको एल्बमको ‘मातृभूमि नेपाल हाम्रो’ बोलको गीतमा मोडलिङ पनि गरे । यी गीतमा अशोक राईले संगीत दिएका छन् ।
कांग्रेस प्रवक्ता शर्माका दुई दर्जन गीत रेकर्ड
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको रचनात्मक क्षमता भाषण कलामा पनि प्रस्फुटन हुन्छ । जब कुनै घटना या विषयवस्तुले उनको मन चसक्क छुन्छ, उतारिहाल्छन् डायरीमा कविता या गीतका रूपमा । दर्जनौँ कविताका सर्जक शर्माले ६ दर्जनभन्दा बढी गीत मात्रै लेखेका छन् । दुई दर्जन गीत रेकर्ड नै भइसकेका छन् ।
‘मैले धेरैजसो गीत सन्देशमूलक लेखेको छु, कुनै घटनाले चसक्क छोयो भने मनमनै शब्द खेलाउँछु, डायरी या नोटप्याडमा टिप्छु, गीत बनिहाल्छ,’ शर्माले आफ्नो सिर्जनाको राज खोले ।
१२ वैशाख ०७२ को भूकम्पपछि शर्मा कार्यकर्तासँगै सिन्धुपाल्चोक र दोलखामा उद्धारमा खटिए । हृदयविदारक दृश्य देखेपछि उनको दिमागमा शब्द फुरिहाले ।
अनि लेखे– भूकम्पमा गुमेका आफन्तको कमस, हामी जुट्छौँ फेरि उठ्छौँ हिरोसिमापछिको जापान भएर । यो गीतमा संगीत पनि आफैँले भरे, स्वर मिसाए शिशिर योगीको । भूकम्पपीडितमाझ गीत लोकप्रिय बन्यो ।
‘तिम्रो पानी चल्दैन भन्नेलाई चाहिएमा रगतै दिउँला’ शर्माको यो गीत जातीय विभेदविरुद्ध उभिएको छ । कम्पोज र शब्द शर्माकै छ । प्रेम र सन्देशका गीत समेटेर तयार पारेका ‘स्वीकृति’ एल्बममा अञ्जु पन्त, रामकृष्ण ढकाल, प्रमोद खरेलजस्ता चर्चित गायक–गायिकाले स्वर दिएका छन् ।
विप्लव : भावुक गीतकार
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव राजनीतिमा खरो नेता मानिन्छन् । अहिलेको राज्य व्यवस्थाविरुद्ध उभिएका विप्लव अझै युद्धको आवश्यकताप्रति वकालत गर्छन् । राजनीतिको खरो पात्रका गीत भने सबैलाई भावुक पार्ने छन् ।
मोहन वैद्यसँग छुट्टिएर नयाँ पार्टी खोलेलगत्तै दुबई, कतार र मलेसियामा संगठन निर्माण गर्न गएका उनी मनभरि पीडा लिएर नेपाल फर्किए । केही पीडा डायरीमा उतारेर फर्किए, गीतका रूपमा ।
नेपाली दाजुभाइको दुःख देखेपछि त्यहीँ लेखे– कसले बनायो दाजै उडी जाने बस । नेपाल फर्केपछि मनमा भरिएको पीडा पनि खन्याएर गीतलाई पूर्णता दिए ।
माइला लामाले संगीत तथा निर्मला घिसिङले स्वर दिइएको विप्लवको गीत युट्युबमा चर्चित छ, खासगरी खाडीमा मजदुरी गर्ने नेपालीमाझ । ४८ हजार ‘भ्युअर्स’ छन् ।
विप्लवले ९–१० वटा गीत लेखिसकेको नेकपाका नेता गुणराज लोहनी बताउँछन् । जनयुद्धताका नै उनी जनवादी गीतमा कलम चलाउँथे । ‘रगतै बग्यो नि बर्खे भेलसरि’ बोलको गीत राज्यले किलो सेरा टु अप्रेसन चलाएको वेला लेखेका थिए ।
जनयुद्धभर माओवादी वृत्तमा यो गीत चर्चित भयो । आफ्ना सहकर्मी कमान्डर किमबहादुर थापा ‘सुनील’ मारिँदा उनले ‘जंग हो साथी जंग’ लेखेका थिए ।
आधा दर्जन गीत रेकर्ड गराइसके नेता ज्ञवालीले
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको साहित्यिक यात्राबारे अधिकांशलाई जानकारी होला । तर, उनी गीतकार पनि हुन् । राष्ट्रवाद र प्रेमभावका गीतमा उनी बढी रमाउँछन् ।
त्यसैले त लेखे– ‘सहरहरूसँग एउटा प्रश्न सोधिरहेछ गाउँ’ गीत । ज्ञवालीलाई मन पर्ने आफ्नै अर्को गीत हो– आस्था ओ मेरी प्रिय । रेकर्ड भइसकेको यो गीतमा भानुभक्त ढकालले स्वर दिएका छन् ।
‘अहिलेसम्म ६–७ वटा गीत रेकर्ड भएका छन्, फुर्सद हुँदा गीत, संगीत र साहित्यमा भुल्न मन लाग्छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘नेपाली पुराना आधुनिक तथा लोकगीत धेरै मन पर्छ ।’
कमल थापाले लेखेको ‘तीन पाते डाँडा काटेर…’ गीत सुपरहिट
‘तीन पाते डाँडा काटेर, कहाँ जान थाल्यौ सारंगी दाइ पिरतीको भाका बोकेर’ नेपाली फिल्मका पुराना दर्शकलाई सायद अहिले पनि यो गीत कण्ठै होला ।
राजेश हमाल अभिनीत चर्चित फिल्म ‘युगदेखि युगसम्म’मा समावेश यो गीत धेरैको गलामा मिसियो । तर, कमैलाई थाहा होला, यो गीत लेख्ने कमल थापा हुन् भनेर ।
हो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा जीवनमा कहिल्यै राजनीति भनेर मात्रै कुदेनन् । खेलकुद र गीत–संगीतमा पनि रमाउँदै यहाँसम्म आएका छन् । उनले माया–प्रेम र राष्ट्रवादी पाँच–सातवटा गीत लेखेको राप्रपाका प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले बताए ।
हरेक नयाँ वर्षमा बढी गुञ्जिने ‘स्वागत स्वागत’ बोलको गीत पनि थापाले नै लेखेका हुन् । आफ्नै पार्टीको नाममा ‘राप्रपा राप्रपा’ गीत पनि लेखेका छन् ।
प्रेमका गीतमा डुब्ने सुनीलबहादुर थापा
राप्रपा प्रजातन्त्रिकका नेता एवं पूर्वमन्त्री सुनीलबहादुर थापा माया–प्रेमका गीतमा मोहित हुन्छन् । सुन्छन् माया–प्रेमका गीत, लेख्छन् पनि यस्तै ।
‘मैले ६–७ वटा मात्रै गीत लेखेको छु, सबै श्रोताले रुचाएका छन्,’ थापाले सुनाए, ‘आफूलाई त आफ्ना गीत मन नपर्ने कुरै भएन ।’ श्रोताले आफ्ना गीत रुचाएको थापाको दाबी स्विकार्न जोसुकै सहजै तयार हुन्छन् । यस्ता मीठा हरफ आखिर फुर्छन् चाहिँ कसरी ?
थापाले जवाफ दिए, ‘गीत लेख्न कुनै त्यस्तो समय छुट्याउँदिनँ, हिँड्द–हिँड्दै, डुल्दा–डुल्दै भावनामा डुब्छु । आफ्नो खल्तीमा भएको काजमा खेस्रा उतार्छु । पछि पटक–पटक गरी मिलाएर गीतलाई पूर्णता दिन्छु ।’
दुई दर्जन गीतका सर्जक प्रदीप नेपाल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वशिक्षामन्त्री प्रदीप नेपालका साहित्यिक कृति धेरै छन् । त्यसो त उनले गीत पनि उत्तिकै लेखेका छन् ।
‘मैले भूमिगत कालमा गीत लेख्ने–गाउने धेरै गरेँ,’ नेपालले भने, ‘गीत रेकर्ड गर्ने गरी त गाइनँ, गाउँ–समाज ब्युँझाउन र पार्टीमा संगठित गर्न गाएँ ।’
नेपाल अहिले पनि निरन्तर गीत लेख्दै छन् । ‘पश्चिम फाँट धरधरी रोयो’ बोलेको आफ्नै गीत उनलाई मन पर्छ । रातिको समयमा गीतका शब्द फुर्ने नेपाल एकैपटक एउटा पनि गीत तयार नभएको बताउँछन् । पटक–पटक गरेर गीत पूरा गर्ने गरेको उनले सुनाए ।
पछिल्लो समय उनले अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई व्यंग्य हानेर गीत लेखेको बताए । ‘हाम्रा डाक्टर राम्रा डाक्टर अस्पताल बन्छ गर्छन् आँगनीमा बिरामीसँगै आमरण अनशन बस्छन्’ बोलको गीत लेखेको नेपाल बताउँछन् ।
गीतकार र गायक गोपाल ठाकुर
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य गोपाल ठाकुर लेख्दैनन् मात्रै, गाउँछन् पनि । उनले आफ्नै शब्दमा स्वर दिएका छन् । भोजपुरी भाषाको ‘कैसन उँचा बा अमने के सान रे जन्मभूमि वा सुन्दर नेपाल’ बोलको गीत ०४१ मा लेखे । ०५८ मा आफ्नै स्वर भरे ।
सुरुमा धार्मिक गीत लेख्ने आफू पछि माक्र्सवादी भएपछि प्रगतिशील गीत लेख्न थालेको ठाकुर बताउँछन् । ‘सयभन्दा बढी गीत लेखिसकेको छु, तर रेकर्ड भने ३० को हाराहारीमा भएका छन्,’ उनले बताए ।
प्रभु साहले निकाले दुई एल्बम
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य प्रभु साहले दुईवटा एल्बम नै निकालिसकेका छ । ०६५ मा ‘मधेस के माटी’ र ०६७ मा ‘अवकाश सुत्व’ एल्बम रेकर्ड गराएका हुन् । पहिलो एल्बममा उनले लेखेका ७ गीत समेटिएका छ भने दोस्रोमा ८ गीत ।
जनयुद्धमै लेखेका गीतलाई शान्तिप्रक्रियामा आएपछि एल्बममा समेटे । कतिपय गीत शान्तिप्रक्रियापछि नै लेखे । उनका गीतमा उदीतनारायण झा, आभास लाल, गोपाल ठाकुरलगायतले स्वर दिएका छन् । उनका सबै गीत भोजपुरी भाषाका छन् ।
राष्ट्रिय भावको गीत ल्याउँदै केशव झा
राष्ट्रिय जनता पार्टीका महासचिव केशव झाको खुबी गायनमा छ । उनले ‘तिमी थोरै’ एल्बम निकालिसकेका छन् । नेपाली भाषामा लेखिएका सबै गीत माया–प्रेमका मात्र छन् ।
झा आफैँ शब्द संकलन, संगीत र स्वर दिएर नयाँ गीत निकाल्ने तयारीमा छन् । ‘तिमी लड या नलड म लडिरहन्छु’ बोलको राष्ट्रिय भावको गीत गाउने तयारीमा रहेको उनले सुनाए ।
राजनीतिभन्दा गीत–संगीतमै रमाउने मणि थापा
विद्यार्थी कालदेखि (०३५) नै मणि थापाको परिचय राजनीतिकर्मीभन्दा लेखक तथा संगीतकर्मीका रूपमा बढी थियो । पार्टीको सांस्कृतिक मोर्चामा सक्रिय उनी गाउन, बजाउन र गीत लेख्न पोख्त थिए ।
०४० पछि मात्रै उनी राजनीतितिर बढी सक्रिय भए । तर, उनी साहित्य र संगीत सिर्जनाकै वरिपरि भुल्दै आए ।
‘भेटेर सोधुँ–सोधुँ लाग्यो प्यारो जलजला’, फोकल्यान्डको टापुबाट जंगलको बीचबाट, लेखिरहेछु चिठी तिमीलाई लडाइँको मैदानबाट’, ‘संसारभरि कहाँ झुके खै क्रान्तिका राता सिपाही’, ‘हाम्रो रोल्पामा पुलिसहरू पसेर, झिटिझाम्टा गरिबका लगे लुटेर’, ‘अरुण तरेर नाना तमोर तरेर, आयौँ हामी वीरताको गाथा बोकेर’लगायत धेरै चर्चित गीत थापाले लेखेका छन् । युद्धकालमा माओवादी नेता–कार्यकर्ताको मुटुमा साहस भर्ने गीत बनेका थिए यी ।
प्रगतिशील रचनामा रमाउने उनको लेख्ने समय नै अनौठो छ । थापाका प्रायः गीत जुनेली रातमा उतारिएका छन् । जुनको टहकमा बस्दा फुर्छन् रे मनभरि गीतका शब्द ।
‘भेटेर सोधुँ–सोधुँ लाग्यो प्यारो जलजला पनि जनयुद्धको तयारीका क्रममा रुकुमको महतको अग्लो ठाउँमा जुनेली रातमा लेखेको हुँ,’ थापाले सम्झिए, ‘जहाँबाट जुनेली रातमा जलजला देखिन्थ्यो ।’ यात्राका क्रममा पनि गीत फुर्ने गरेको उनले सुनाए ।